२०७३ फागुन १३ गते शुक्रबारको राशिफल - SangaloKhabar
उठीउठी, बसीबसी प्रदेशको नामको विषय टुंग्याउन सरकार तयार छ : मुख्यमन्त्री राई
धनकुटा बजारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते
मोरङमा श्रीमतीलाई आगो लगाएर मार्ने श्रीमान पक्राउ
गुडिरहेको बसबाट खसेर एक जनाको मृत्यु
उदयपुरमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु
इटहरीमा बसको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु
पाँचथरमा पहिरोले घर पुर्दा तीन जना बेपत्ता
बालिका बलात्कार आरोपमा १६ वर्षीय किशोर पक्राउ
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित चार युवा पक्राउ
२०७३ फागुन १३ गते शुक्रबारको राशिफल
वि.सं. २०७३ साल फागुन १३ गते। शुक्रबार। इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी २४ तारिख। नेपाल संवत् ११३७ सिल्लागा। फागुन कृष्णपक्ष। तिथि– त्रयोदशी, २०:५९ बजेउप्रान्त चतुर्दशी।
प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर जुट्नेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुनेछ। व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मिहिनेत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ।
परिस्थिति अनुकूल रहे पनि अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। जीवनशैली व्यस्त रहनेछ तर उपलब्धिविहीन काममा समय बित्न सक्छ। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा चिताएको काममा बाधा आउला। गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। तर नयाँ काम गर्न समय पर्खनुहोला।
समयमै गम्भीर नबन्दा समस्या थपिन सक्छ। आफ्नै कमजोरीले इष्टमित्र टाढिएलान्। हुलमुलमा धनमाल गुम्न सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै उपचारमा खर्च हुनेछ। अर्थ अभाव महसुस होला। अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ला। फाइदाका पछि लाग्दा आत्मीय सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्।
परिस्थिति अनुकूल रहे पनि जीवनशैली व्यस्त रहला। निम्तो आए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्न सक्छ। भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। आक्षेप लगाउनेहरूले दु:ख देलान्। बोली–व्यवहारमा संयम रहँदै शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू थोरै हुनेछन्। तापनि प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखद् रहनेछ।
परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। रकम तथा भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। शत्रुभाव राख्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन्। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सकारात्मक नहुन सक्छ। सहयोगीहरूले साथ दिन छाड्नेछन् भने अस्वस्थताले कमजोर महसुस हुनेछ। अवसरले पछ्याए पनि कर्मगतिले पछि पार्न सक्छ। बौद्धिक व्यक्तित्वसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ला। अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। व्यवसायमा सोचेको फाइदा नउठ्न सक्छ। गुरुजनको मार्गदर्शन लाभदायक रहनेछ।
साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। पशु र कृषिबाट सोचेको लाभ नउठ्न सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। काम बिग्रने डरले सताउनेछ। बेसुरमा वचन दिनाले दुःख पाइनेछ। साथीभाइले साथ नदिन सक्छन्। काममा आमाको मार्गदर्शन लाभदायक रहनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ।
कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउन सक्छ। साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ। प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। अवरोध हट्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। व्यावसायमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा राम्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। समयको मागअनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ। हल्लाको भर पर्दा दु:ख पाइनेछ। मिहिनेत गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुन सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउनेछन् भने पहिलेकै काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अर्थ अभावले सताउन सक्छ। नियमलाई बेवास्ता गर्दा चुनौती आइलाग्नेछन्।
बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्छ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। विगतका कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ। पहिलेको सफलताले पनि थप हौसला जगाउनेछ। विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ।
खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अभाव देखा पर्ने समय छ। तापनि मिहिनेत गर्दा पछिलाई फाइदा हुनेछ। केही शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। तर अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। बेलामा होस नपुर्याउँदा केही चुनौती आउलान्। फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुनाले यात्राको अवसर आउन सक्छ।
मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। आँटले काम सम्पादन हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। तर, आजको लाभांश सञ्चय नहुन सक्छ। सरसापटमा धन खर्च होला।
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) – नेपाली पात्रो
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १३, २०७३ समय: ६:२१:०२
२०७९ असार १९ गते आइतवारको राशिफल
ई.सं. २०२२ जुलाइ ३ नेपाल सम्बत ११४२ दिल्लाथ्व चतुर्थी, असार शुक्ल चतुर्थी तिथी, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायणं, ग्रिष्...
२०७९ असार १८ गते शनिवारको राशिफल
ई.सं. २०२२ जुलाइ ०२ नेपाल सम्बत ११४२ दिल्लाथ्य तृतिया, असार शुक्ल तृतिया तिथी, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायणं, ग्रिष्म...
२०७९ असार १७ गते शुक्रवारको राशिफल
ई.सं. २०२२ जुलाइ ०१ नेपाल सम्बत ११४२ दिल्लाथ्व द्वितिया, असार शुक्ल द्वितिया तिथी, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायणं, ग्र...
२०७९ असार १५ गते बुधवारको राशिफल
ई.सं.२०२२ जुन २९ नेपाल सम्बत ११४२ तछलागा आमै (८ः४२ सम्म), असार कृष्ण औँसी तिथी (८ः४२ पछि), नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरा...
२०७९ असार १४ गते मंगलवारको राशिफल
ई.सं.२०२२ जुन २८ नेपाल सम्बत ११४२ तछलागा चतुर्दशी (६ः१२ सम्म), असार कृष्ण औँसी तिथी(६ः१३ पछि), नल नामक संवत्सर, सूर्य उत...